‘ए मेरो हजुर ४’ मा सुहानाको जोडी प्रदिप ? « Pariwartan Khabar
‘ए मेरो हजुर ४’ मा सुहानाको जोडी प्रदिप ?
२२ भाद्र २०७६, आईतवार १०:१८
२२ भदौ २०७६, काठमाडौँ
अभिनेता प्रदिप खड्का यतिबेला चलचित्र प्रेमगीत ३ को तयारीमा व्यस्त छन् । दशैँपछि छायांकन सुरु हुने चलचित्रमा प्रदिपको जोडी नव नायिका कृष्टिना गुरुङसँग बाधिने भएको छ । यस्तै प्रेमगीत ३ पछि प्रदिपले हेमराज बिसीको चलचित्र शुभ विवाह गर्ने चर्चा थियो ।
यसैबिच प्रदिपलाई चलचित्र ए मेरो हजुर ४ अफर गरिएको छ । ए मेरो हजुर ३ पनि पहिले प्रदिपलाई नै अफर गरिएको थियो । तर उनले व्यस्तताका कारण चलचित्र छाडेका थिए । यस्तै गोप्य स्रोतअनुसार सुनिल कुमार थापाले प्रदिपलाई प्रेमगीत ३ पछि ए मेरो हजुर ४ गर्न आग्रह गरेका छन् तर प्रदिपले भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
प्रदिप अहिले दोधारमा परेका छन् । उनले हेमराज बिसीको चलचित्र गर्ने निर्णय गरिसकेको बेलामा उनलाई ए मेरो हजुर ४ बाट अफर आएको खबर बाहिरिएको छ । झरनासँग भने प्रदिपको कुनै कुरा भएको छैन । तर प्रदिपले ए मेरो हजुर ४ गरेको खण्डमा उनको जोडी नायिका सुहाना थापासँग बाधिने पक्का छ ।
कार पाएपछि हिमेशले भने, ‘२५ लाखको कार त पाए तर चलाउनै आउँदैन’
मिहिनेती अभिनेता प्रदिप…
बर्षा भन्छिन्, ‘लोकप्रियताको लागि मरिमेट्नु गलत हो’
कमेडी च्याम्पियन बिजेता हिमेश पन्तले बल्ल पाए जितेको कार
दश वर्षे जनयुद्धका क्रान्तिकारी जनवादी गायक मोहित श्रेष्ठ (भिडियो सहित)